Tijaabada degdega ah ee Coronavirus, Tijaabada Dhiiga Degdegga ah, Baadhista Degdegga ah ee Ka-hortagga - HEO
Cassettes Tijaabo Degdeg ah oo COVID-19 ah
Xanuunada Faafa ee Kaasjooyinka Baaritaanka Degdega ah
HAL TALAABO OO TALLAABO HCV
Qalabka Tijaabada Degdegga ah ee HCV
COVID-19 IgG/IgM Cassette Tijaabo Degdeg ah (Colloidal...
Tijaabada degdega ah ee Antigen-ka ee COVID-19 Corona Vir...
Soo-saare OEM/ODM Qalabka Tijaabada Degdegga ah ee Coronavirus...
Hangzhou HEO Technology Co., LTD waxaa ka go'an Cilmi-baarista, Horumarinta iyo Soo-saarka In-Vitro Diagnostic (IVD) Cassettes Test iyo Qalabka kale ee Caafimaadka 10kii sano ee la soo dhaafay.
Waxaan si guul leh u aasaasnay ​​xiriir ganacsi oo aad u wanaagsan 60 waddan oo kale oo adduunka oo dhan ah, sida Koonfur-bari Aasiya, Yurub, Latin Ameerika, Koonfurta Ameerika, waddamada Afrika iwm. Shirkadeena waxay dabooshaa dhul ka badan 3000 mitir oo laba jibbaaran. Waxaan haynaa warshad tijaabo ah oo ay shahaado ka bixisay Maamulka Cuntada iyo Dawooyinka ee Qaranka iyo aqoon-is-weydaarsiga nadiifinta darajada C-1100 mitir murabac. Tan iyo markii la aasaasay 2011, waxaan bilownay inaan diirada saarno badbaadada cuntada iyo baarista, horumarinta In-Vitro Diagnostic Reagents, waxaanan si adag ula soconaa ISO13485 iyo ISO9001 ee nidaamka maaraynta tayada iyo dhammaan nidaamka wax soo saarka.
Tayada aadka u fiican ayaa xukuma mustaqbalka!
Dhaqdhaqaaqyada shirkadaha ee Hangzhou Fenghua Ururka Horumarinta Dhaqaalaha -- Gelida Tignoolajiyada HEO
Galabnimadii Ogosto 15, Ururka Horumarinta Dhaqaalaha ee Hangzhou Fenghua wuxuu qabtay hawl ganacsi - wuxuu ku socday unugga ku-xigeenka Xoghayaha Guud ee "teknoolajiyada HEO" si uu u dareemo soo jiidashada ganacsiga ee bandhigga soo ifbaxaya ee berrinkii tignoolajiyada biomedical. Hangzhou...
WHO ayaa dhaleeceysay sinnaan la'aanta qaybinta tallaalka taajka cusub
Dunidu diyaar uma aha Faafida Covid-19 waxayna u baahan tahay inay qaado tillaabo adag oo wax ku ool ah si loo dhimo waxyeelada guud ee uu keeno masiibada, Guddiga Madaxa Bannaan ee Diyaarinta iyo Ka jawaabista Cudurrada Faafa ee uu hoggaamiyo Ururka Caafimaadka Adduunka, ayaa lagu sheegay warbixin. la sii daayay Isniintii. Kani waa...
Novel Coronavirus oo laga helay Jarmalka
Nooc cusub oo fayras ah oo loo yaqaan 'Covid-19' ayaa laga helay Bavaria, koonfurta Jarmalka, caddaymaha hordhaca ah waxay muujinayaan in nooca uu ka duwan yahay waxa la yaqaan. Cadaadiska ayaa laga helay magaalo ku taal Bavaria. Nooc cusub oo fayras ah ayaa la rumeysan yahay in lagu arkay 35 ka mid ah 73 qof ee la xaqiijiyay inay...
Qolka 201, Dhismaha 3, No. 2073 Jidka Jinchang, Degmada Yuhang, Hangzhou, Shiinaha